SingForYou.net - Akyin Nar Nya
Tags : ဂွိ မရှိတဲ့ည.... :P
By : philtre on Jul 25, 2009
Score: 119 Rating: 4.96 Comments: 48
Akyin Nar Nya's Description
သွပ်သွပ် အိပ်ချင်ဘီ... အဒူချော့သိပ်မှာလဲဟင်...း(
paradise on Dec 4, 2009 0
thut ye' har da ya shwin say twe ko read ya tar......~ ~~~ eye water twe htwat kone pyi.....taw lal taw par pay tal THUT THUT yal..*****:))))))))))
pikachulay on Sep 20, 2009 0
i love this song,,,thank u for singin .....very nice bro..keep going ...******
f4 on Aug 3, 2009 0
bae du mha chook ma that bu....8 chin 8 ma 8 chin nay... :P ...ko bar thar ko so pee ma 8 chin bu lar? BTW 5*****....သွပ်သွပ်
deathbloodydeath on Jul 26, 2009 0
Thoot Thoot ko Micheal Jackson ka lar chyot thate mae tae!!!!
greenlay on Jul 26, 2009 0
သူများအိမ်သွားပြီး အစားပုတ်တယ်ပြောသော " သွပ် " ကို အပြစ်ပေးပါ :P
philtre on Jul 26, 2009 0
deathbloodydeath က သေမင်းတမန်ဆိုတော့ သေသူတွေနဲ့ အဆက်သွယ်ရှိတာ ယုံပါတယ်...း)
maryaung on Jul 25, 2009 0
philtre on Jul 25, 2009 0
အရွယ်မရွေးအချော့ကြိုက်တာ အရီးလေးမေရီသိပါတယ်လေ... ကွန်မန့်ရေးပြီး ဗုတ်မပေးတာက စတိုင်အသစ်လား.. မလိုင်အချစ်လားဟင်... သွပ်ကို အဲ့လို မကျီစားနဲ့ .. သွပ်အသဲက ခပ်ငယ်ငယ်ရယ်.. ဟွန်းးးးး...း(
shweoomay on Jul 25, 2009 0
ရက်စက်ပါပေ့..ချွေအူးမေရယ်... သွပ်ဘ၀ကို လွတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့လေ... အဟင့်...ဟင့်... :P... ဒါပေမဲ့ ရွှေဥမေ ပေးတဲ့ဟာတော့ ရွှေဟင်္သာလေး ရလိုက်ပါတယ်... စတားတွေပြောတာပါ... :P ^_^
myobala on Jul 25, 2009 0
လူဆိုးဗိလ် အင်္ဂုလိဗလ လဲလိုက်ဆိုအုံးမယ်လား.. အားပေးရမှာပေါ့... သွပ်ရဲ့ မမမျိုးပဲဟာ... :P ^_^
galarLay on Jul 25, 2009 0
gwi ma shi yin, pillow shi tal kwa pi 8.....
ကုလားလေး ပေးတဲ့အကြံက.. သေးထွက်အောင်မှန်နေရင် ဒွတ်ခ.. ဒါကြောင့် ခေါင်းအုံးက လျှော်ရခက်လို့ ခွမအိပ်ပါစေနဲ့နော်... so..no thanks par galarlay... :P ^_^
forevermoe on Jul 25, 2009 0
ဂွိ မရှိတဲ့ည... so tot 8ma pyaw buu pop lay ... ma arr pay maeasone hti listen pyi comment pay twer tal nor...really good tal ko g သွပ် 5******************4u :)
ဂွိ.. မရှိတဲ့ညကျမှ.. မိုးကလဲမအားဆိုတော့.. ခက်ကုန်ပြီကွယ်… သွပ်သွပ်တယောက်ထဲ အထီးကျန်စွာ သည်းခံရတော့မှာပ… အဟင့်..ဟင့်… :P .. ^_^
thura24 on Jul 25, 2009 0
လာအားပေးသွားတယ်နော် .... ကောင်းပါတယ် ဗျာ... ထိန်းထား bro...
သီဟသူရရယ်… အရင်းမပါ အဖျားမပါနဲ့ သွပ်က ဘာကိုထိန်းထားရမှာလဲဟင်… တခါတလေ သွပ်က ထိန်းလို့ရ၀ူးဗျ… (စိတ်မြန်.. ကိုယ်မြန်ရှိတာကိုပြောပါတယ်)… ခွိ…ခွိ… :P .. ^_^
lain on Jul 25, 2009 0
ta chinaso kg peeayaeatar taw tae" myo zar kyi" ko *amyar kyi pay lite bar tal naw. *********************************
ဒီတယောက်နဲ့တော့ ခက်ကုန်ပြီ… ပေါသွပ်နဲ့မြို့စား.. မှားခေါ်ရလောက်အောင်.. မလိန်းအာရုံတွေ ဘယ်ရောက်နေလဲဟင်… တော်ကြာနေ မြို့စားကြီးက တောင်ပုလုမှာ ပြောင်ထုထုပြီး ဒေါကန်နေရင်.. ဒွတ်ခ… :P .. ^_^
tristanisole on Jul 25, 2009 0
ba gyi took mike tae byar .... heeeee
အယ်… ဘီလိုလူကြီးလဲ… ဒီလောက် နုနုသေးသေး သွပ်ကလေးကို.. “တုတ်ကြီး” တဲ့… လုပ်ပါနဲ့ဗျာ.. တော်ကြာ ရှိစုမဲ့စု ဥထားသမျှ ပရိတ်သတ်လေး လန့်ဖျန့်ပြေးကုန်လို့.. အားပေးမဲ့သူမရှိဖြစ်နေပါအုံးမယ်.. အဲ့လို မကျီစားကြေးနော်… နော်… :P .. ^_^
shwezin888 on Jul 25, 2009 0
thut... 8 chin yin 8 naw .....8 pyawe aung 8 ....sing4u open pe" မြို့စားကြီး " ta chin nel " Ko Taw " toe...." Myo " so tha သွပ် chit2" Bala " lay ..toe ta chin nar synb8 naw ......naw... lain mar tal . ^_* wow....ayan kg5*4u
မဖြစ်ပါဘူး.. ရွှေစင်လေးရယ်… ဒီအဖိုးကြီးတွေအသံက.. D4E ကားသံတွေလို ဆူညံဆူညံနဲ့ ဘယ်လိုလုပ် နားဝင်ပီယံရှိမှာလဲ.. သွပ်ရဲ့ ညလေးတွေအသံလောက်ကို သာယာမှုမရှိဘူး.. ဂယ်ပြောတာ.. သီချင်းနားထောင်ရင်တောင် အမျိုးသမီးတေးသံရှင်ပဲ ရွေးနားထောင်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်.. ဗူးသွပ်..လို့တော့ မဦးမချွတ်..ခေါ်ရ၀ူးနော်… :P .. ^_^
mayyu on Jul 25, 2009 0
ဒီအသက်အရွယ်ကြီးမှ ဘယ်သူ.ကိုချော.သိပ်ခိုင်းနေတာလဲ အော်တော်တော် ခက်တာပဲဘကြီးတို.ကတော.လေ ကောင်းပါပေတယ် ဘကြီးသွပ်
ဗေလုဝလိုလှတဲ့ မေယုညလေးရယ်.. ခုတလော ဘဘအသဲတွေ ခဏခဏကွဲနေလို့ မင်းရဲ့သူနာပြုပညာလေးနဲ့.. ကြင်နာပေးပါအုံးကွယ်..နော်… နော်လို့.. :P .. ^_^
tha75 on Jul 25, 2009 0
သွပ် လေး ရဲ့....... အကြင်နာည မှာ ဒူလေး နဲ့.... ကျူ နေတာ လဲ ဟင်.... ကြိတ် ပြီး ကျူ နဲ့နော် ..တော် တော် ကြာ... ဂွိ ဂွိ နဲ့တိုး နေ လို့...ဟုတ်ပေ့ ဖြစ်နေ ဦး မယ် .... ဘာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် .. ၅ စတား ပဲ .... ဟဲ ဟဲ ...
ခေါင်းစဉ်ကိုက... ဂွိ မရှိတဲ့ည..လို့ရေးထားတယ်လေ.... 75 နှစ်သားသား မျက်မှန်တတ်တော့... :P ^_^
htarwara on Jul 25, 2009 0
kg mhar kg bar...ko pawtoot kyi...5* for you.
ထာဝရဗားရှင်းလေ အားကျလို့.. ထာဝရဆိုသလို သေချာကျင့်ဆိုတာ.. ဟိုနေရာမှာလေ.. အို အေး အေး အို..နေရာမှာ.. သံစဉ်ကွာတယ်.. ဟိုအောက်က ခလေးအဖေနှစ်ယောက်ကတော့..သူတို့ခလေးတွေ အသံဗြဲကြီးတွေနဲ့အော်ငိုတာကို ..စိတ်မရှည်စွာ အော်အော်ချော့သိပ်တာ အကျင့်ပါနေလို့ဖြစ်မယ်.. အဲ့နေရာမှာ ကုန်းကုန်းပြီးအော်ထားကြတယ်လေ... သွပ်နဲ့ ထာဝရကတော့ အပျိုလူပျို နုနုထွတ်ထွတ်လေးတွေပီပီ.. သူတို့လို အော်တတ်ကြ၀ူးနော်... ခစ်...ခစ်.. :P ^_^
Maung_Than on Jul 25, 2009 0
thut thut yay 8 chin lar loe' lar? victoria ko poe' lite ya ma lar??????? bar mha ma lote ya buuu nawwww.......naw loe' ha ha ha....*****
သနားသဖြင့် ၀ိတိုရိယ တော့မပို့ပါနဲ့ဗျာ.. သူ့အရိုးတွေနဲ့ပွေ့သိပ်ရင် သွပ်..အိပ်ပျော်မှာဟုတ်ဝူးး... မီလီဆိုင်းရပ်စ်လေးပဲ ပို့ပေးပါ..သူက အဆီတုံးလေးတွေပိုများတယ်..နော်... နော်.. :P ^_^
greenlay on Jul 25, 2009 0
ဟော ... ဆိုပြန်ပြီ နောက်တစ်ပုဒ် ဆိုနိုင်ပါပေတယ် သွပ်ရယ် ကောင်းပါ့ **** သွပ်ကတော့ အွန်လိုင်းမှာကြီးပဲတွေ့နေရပါလား ..... သီချင်းဆိုရင် မရပ်ချင် ဆေးလိပ်ဆိုရင် မချွတ်ချင် ဘီယာဆိုရင် အရမ်းခင် .... ဟား ဟား သွပ် စတာနော် စိတ်ကြီးမဆိုးပါနဲ့ :p :P
ရတုကဗျာ..ပျို့လင်္ကာနှင့်.. သာသည်သီချင်း.. အဲစောင်းညှင်းကို.. မပြတ်လေ့ကျက်.. တီးမှုတ်လျက်သာ နေကောင်းစွာ ဟူသည့်အတိုင်း... အဟမ်း..ဟမ်း... ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ... အရက်ဘီယာ...ဆေးတဖွာနှင့်.. ဒီမှာသီချင်း.. သီဆိုရင်းသာ... အိုးအိမ်မကွာ.. နေကောင်းစွာ.. ပေါ့ မမစိမ်းရယ်... ဆွင်းဖလူးက အမြဲပဲသတင်းထူးနေတော့.. သွပ်သွပ်ကြောက်တယ်.. အပြင်ထွက်ရဲဝူးးး... :P ^_^
winwinthant on Jul 25, 2009 0
အဒူ့ဆိုတာ ယူ့ကိုပြောတာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲလေ... ... :P ^_^
qyar on Jul 25, 2009 0
a yan kg tel..bro..5***** per
ကိုကိုကျူ... နောက်တခါ ကျူလဲကျူ..သီချင်းလဲဆိုပါ..မေ့လောက်အောင်တော့ကျူပါနဲ့နော်... ခစ်..ခစ်.. ခု သူမေ့သွားလို့... သွပ် သွပ် လိုက်ဆိုရတာ..တိရဲ့လား.. ဟွန်းးး... :P ^_^
KoBurma on Jul 25, 2009 0
သွပ်တို့ များ အဆင်ပြေနေလိုက်တာ…Daddy မီးခြစ် ဖြစ်နေပြီ…ဟက်ဟက်ဟက်စ်…… တော်တော်လေးကိုကောင်းလွန်းတယ်… ၅ စတားစ် ပေးသင့် ပါတယ်… သွပ်သွပ်ရယ်…စိတ်ချလက်ချအိပ်တော့ နော်…(အိပ်မပျော် ရင်ထပ်ဆိုနေမှာစိုးလို့ … ဟက်ဟက်ဟက်စ်)
မြို့စားကြီးချော့သိပ်ပါနဲ့... နှုတ်ခမ်းမွေးစူးတယ်... သွပ်.. နေတတ်ဝူးးးး... မြို့စားမင်းသမီးတော်လေးပဲ ချော့သိပ်ခိုင်းပါ...နော်....နော်လို့... :P ^_^
Taw_Thar_Lay on Jul 25, 2009 0
တယူဇနာက ကျဲချလိုက်တဲ့ ဘဘတော ကြယ်တွေကို တလုံးမကျန် အကုန်ကောက်သိမ်းထားပါတယ်ဗျာ...း)
khinwadi on Jul 25, 2009 0
အိုး .. ဒါလေးကလဲ တမျိုးကောင်းတာပါပဲလား ***** ရထိုက်ပါတယ် ယူပါကွာ (ရော့ ယူလိုက်)2 ယူပါ
ကိုထွတ် သီချင်းနဲ့ ကိုသွတ်ကို အားပေးသွားတဲ့ ခင်ဝတီလေး... တပင်စီပေးလိုက်မယ်... နှင်းဆီပင် လက်ဆောင်ပြောတာ... ခွိ...ခွိ..း)
susannyunn on Jul 25, 2009 0
daddy thut..... daddy ka totachain tine ko so nay tot tar pel.. credit taw taw PAW te htin te naw..aw.. mait loz.. daddy yay..name ko ka PAW thut koe.. hahhahahhahah:)) 5*****
ဇူစကာယွန်း...လူတကာလွမ်း နေတဲ့အချိန်မှာ... သွပ်သွပ်လဲ လွမ်းချင်တာပေ့ါလို့... သည်းခံနားထောင်နော်.. တနေ့တပုဒ်ပဲ ဆိုပါတော့မယ်... ခစ်..ခစ်..း)
zezawar on Jul 25, 2009 0
Gu Yu gyi!!!***** for you
ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ.. ဆာဒူးလေး...း)